Sin Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan iyada oo aan
Waxaad Ma tahay kuwa dhawrsada Enough
Kasta oo hadda ka dibna waxaan ka hadli doonaa qof ku sheegay in ay doonayaan inay noqdaan Christian a, laakiin waxa ay u muuqdaan in ay u maleynayaa in waqtiga ma aha arrin sax ah. Markii aan iyaga sababta weydii, waxay ii sheegi ku saabsan oo dhan, iyagoo dembiyadooda, oo dhan of ceebaha ay, iyo dhammaan waxyaalaha waayey ilaa ay samaysay ee la soo dhaafay. Weligay kula murmina waxyaalaha Dambigooda Dartiis, laakiin waxaan samayn hardiyi dib on malahooda.
Waxay tahay in loo maleeyo in dembi bartey aad istaagaya soo socda Masiixa, marka soo horjeeda saxda ah waa run. In dambiile ah inama sii Masiixa; waa sababta aan isaga u baahan tahay. Haddaynu sugno ilaa aynu eegno kaamil ah isagaana u qabsanaysaa aan doonaa weligiis sugaya.
In mid ka mid ah xigasho oo aan jeclaa, Charles Spurgeon na ugu baaqay in ay joojiyaan raadinaya nafteena, iyo si ay u bilaabaan isha ku heysa inay Ciise. Waxa uu sheegay in:
"The! Waxaad ku odhan, Anigu ma toobad ha ku filan. "Taasi waxa ay raadinaysaa naftaada si. 'Anigu ma aaminsani ku filan. "Taasi waxa ay raadinaysaa naftaada si. "Waxaan sidoo kale aan istaahilin ahay. 'Taas waxaa raadinaya naftaada si. Anigu ma ogaan karo,'Ayaa sheegay in kale, 'Aan xaqnimada wax. "Waa arrin sax ah in la yidhaahdo in aadan haysan wax xaqnimo; laakiin waa arrin khalad ah in la raadiyo wax. It…
Hip hop iyo dagaalka ka dhanka ah Sin
Tani waa qayb ka mid ah wareysi aan la sameeyey waxay doonayaan Ilaah. Waxaan boostada doonaa qaybaha kale ee Wasarada ka dhigeysa ilaa
Hip hop iyo dagaalka ka dhanka ah Sin ka waxay doonayaan Ilaah on vimeo.